दुर्गापूजा Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
योम किप्पुर – दुर्गापूजा को सुरुवात
दुर्गा पूजा (वा दुर्गोत्सव) दक्षिण एसियाको धेरै भागमा अश्विन ( अश्विन ) महिनाको ६ -१० दिन मनाइन्छ। यो असुर महिषासुरको बिरूद्ध आफ्नो पुरानो युद्धमा देवी दुर्गाको विजयको सम्झना गर्न मनाईन्छ। धेरै भक्तहरूले महसुस गर्दैनन कि योम किप्पुर ( वा प्रायश्चितको दिन ), भन्ने अधिक पुरानो उत्सवको संग मेल खान्छ जुन ३५०० वर्ष अगाडि शुरु भयो र हिब्रू वर्षको सातौं चन्द्रमासको १० औं दिनमा मनाइन्छ। यी दुबै चाडपर्वहरू पुराना हुन्, दुबै एकै दिनमा पर्दछन (सम्बन्धित पात्रोहरूमा। हिन्दू र हिब्रू क्यालेन्डरहरूको विभिन्न वर्षहरूमा उनीहरूको अतिरिक्त लीप-महिना हुन्छ, त्यसैले तिनीहरू पश्‍चिमी पात्रोमा सधैं मिल्दैनन तर ती दुवै सधैं सेप्टेम्बर – अक्टुबर महिनामा पर्दछन ) ,यी दुबैमा बलिहरू समावेश भएका हुन्छन् , र दुबैले ठूला बिजयहरूको सम्झना गराउछन् । दुर्गा पूजा र योम किप्पुर बीच समानताहरू आश्चर्यजनक छन् । केही भिन्नताहरू पनि त्यस्तै उल्लेखनीय छन् ।
प्रायश्चितको दिनको शुरुवात
मोशा र उनका दाइ हारूनले इस्राएलीहरूलाई डोर्‍याएर येशू भन्दा १५०० वर्ष अघि उक्त व्यवस्था पाए।
हामीले श्री मोशालाई पछ्यायौं इस्राएलीहरू (हिब्रू वा यहूदीहरू) दासत्वबाट मुक्त हुनुका साथै कलियुगमा इस्रायलीहरूलाई डोर्‍याउनका लागि दश आज्ञा प्राप्त गर्यौं । ती दश आज्ञाहरू एकदम कडा छन्, पापले मोहित भएको व्यक्तिलाई पालन गर्न असम्भव छ। यी आज्ञाहरूलाई विशेष बाकसमा राखिएको थियो जसलाई करारको सन्दूक भनिन्छ।
करारको सन्दूक एउटा विशेष मन्दिरमा थियो जसलाई महापवित्र स्थान भनिन्थ्यो । हारून, मोशाका दाइ र तिनका छोराहरू पूजाहारीहरू थिए जसले यस मन्दिरमा मानिसहरूको पापको प्रायश्चित वा पाप ढाक्नको निम्ति बलिहरू चढाउने काम गर्दथे। योम किप्पुर – प्रायश्चितको दिन मा विशेष बलिदानहरू चढाइन्थ्यो। आज हाम्रो लागि यी मूल्यवान पाठहरू छन्, र प्रायश्चितको दिन (योम किप्पुर) लाई दुर्गा पूजाको समारोहसँग तुलना गरेर हामी धेरैकुरा सिक्न सक्छौं।
प्रायश्चितको दिन र छाडा छोडिने बोका
हिब्रू वेदहरू, जुन आज बाइबल हो, मोशाको समय देखि नै प्रायश्चितको दिन को बलिदानहरू र अनुष्ठानहरूको बारेमा सटीक निर्देशनहरू थिए। हामी देख्छौं कि यी निर्देशनहरू कसरी सुरू हुन्छन्:
हारूनका छोराहरू मध्ये दुइ जना परमप्रभुलाई धूप चढाउँदै गर्दा मरे। त्यस समयपछि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो।2परमप्रभुले भन्नुभयो, “तेरो दाज्यू हारूनलाई भन। उसलाई सम्झाऊ उसको इच्छा अनुसार जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला पर्दा पछाडी महा-पवित्रस्थान जहाँ पवित्र सन्दूक राखिएको छ त्यहाँ कहिले पनि नजाऊन। यस पवित्र सन्दूकमाथि भएको कृपा-आसन छ अनि म त्यो कृपा-आसनमाथि बादलमा दर्शन दिन्छु। यदि हारून त्यस कोठामा गए ऊ मर्न सक्छ।
लेवी १६ :१-२
प्रधान पूजाहारी हारूनका दुई छोराहरू मरेका थिए जब उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरको महापवित्र स्थानमा अनादर पुर्वक प्रवेश गरे जहाँ परमप्रभुको उपस्थिति थियो । त्यो पवित्र उपस्थितिमा उनीहरूले दश आज्ञाहरू लाई पूर्णरूपमा पालन गर्न असफल भएपछि उनीहरूको मृत्यु भयो।
प्रायः सावधानी पूर्वक निर्देशनहरू दिइएको थियो , जसमा सम्पूर्ण वर्षको मात्र एक दिन, जब प्रधान पूजाहारी महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्थे – प्रायश्चितको दिन । यदि ऊ अरू कुनै दिन प्रवेश गर्‍यो भने ऊ मर्नेछ । तर यो एक दिन पनि, प्रधान पुजारीले करारको सन्दूकको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले, उसले गर्नुपर्ने थियो:
3 “महा-पवित्रस्थान भित्र पस्नु भन्दाअघि हारूनले यसै गर्नु पर्छ। हारूनले पापबलिको निम्ति एउटा साँढे र होमबलिको निम्ति एउटा भेंडा चढाउँनु पर्छ।4हारूनले आफ्नो सारा शरीर पानीले पखाल्नु पर्छ। तब उसले यी वस्त्रहरू धारण गर्नुपर्छः उसले लिनिनको पवित्र वस्त्र धारण गर्नु पर्छ। उसले लिनिनको भित्री लुगाहरू पनि लगाउनु पर्छ। उसले आफ्नो टाउकोमा लिनिनको फेटा र कम्मरमा लिनिनको पटुका कस्नु पर्छ। यी वस्त्रहरू पवित्र हुन्।
दुर्गा पूजाको सप्तमीको दिन, दुर्गालाई प्राण प्रतिष्ठानले मूर्तिहरूको अगाडि लान्छन र मूर्ति स्नान गरेर लुगा लगाउँदछ । योम किप्पुर नुहाउने काममा पनि संलग्न थिए तर यो प्रधान पुजाहारी थिए जसलाई नुहाईएको थियो र महापवित्र स्थानमा जान तयार थियो, देवता होइन। परमप्रभु परमेश्वरलाई पुकार्नु अनावश्यक थियो – उहाँको उपस्थिति वर्ष भरि महापवित्र स्थानमा रहन्थ्यो । यस आवश्यकताको साटो यस उपस्थितिलाई भेट्न तयार हुनुपर्‍थ्यो । नुहाउने र लुगा लगाएपछि पुजाहारीले पशुहरू बलिदानको लागि ल्याउँथे।
5 “हारूनले दुइवटा पाठाहरू पापबलिको निम्ति लानु पर्छ अनि एउटा भेडी होमबलिको निम्ति इस्राएलका मानिसहरूबाट लिनु पर्छ।6तब हारूनले पापबलिको निम्ति साँढे चढाउनु पर्छ। पापबलि ऊ आफ्नै निम्ति हो। हारून आफ्नो परिवार र आफैंई पवित्र पार्नु उसले यसो गर्नु पर्छ।
हारूनको आफ्नै पापहरू ढाक्न या प्रायश्चितको लागि साँढेको बलि चढाइन्थ्यो । साँढे वा बोकाको बलिहरू कहिलेकाँही दुर्गा पूजाको समयमा गरिन्छ । योम किप्पूरले पुजाहारीको पाप ढाक्न साँढेको बलिदान विकल्प थिएन । यदि उसले आफ्नो पापलाई साँढेको बलि चढाउँदैन भने, प्रधान पूजाहारी मर्नेछन् ।
त्यसपछि तुरुन्तै, पुजाहारिले ती दुईवटा बोकाहरुको उल्लेखनीय समारोह गरे।
7 “तब हारूनले दुइवटा बोकाहरू भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुअघि ल्याउनु पर्छ।8 हारूनले ती दुइवटा बोकाहरू माझ चिठ्ठा लगाउँछ, एउटा परमप्रभुको निम्ति हुन्छ र अर्को मानिसहरूको दोष निवारणको निम्ति छाडा छोड्नु पर्छ।9“चिठ्ठामा परेको बोकालाई हारूनले पापबलिको निम्ति परमप्रभुलाई चढाउनेछ। 10 दोष निवारणको निम्ति चिठ्ठा परेको बोकालाई हारूनले परमप्रभुअघि ल्याई मरुभूमिमा खुला छाडिदिनेछ। यो मानिसहरूलाई शुद्ध बनाउनको लागि हो।
एकचोटि साँढेलाई आफ्नै पापहरूको लागि बलिदान गरिसके पछि, पुजाहारीले दुईवटा बोका लिइ चिठ्ठा हाल्ने गर्थे। एउटा बोकालाई छाडा छोडिने बोका भनेर मानिन्थ्यो। अर्को बोकोलाई पापबलिको रूपमा बलिदान गर्नुपर्ने थियो। किन?
15 “तब हारूनले मानिसहरूकोलागि पापबलिको बलि दिनेछ। हारूनले पर्दा पछाडीको कोठामा बोकोको रगत ल्याउनु पर्छ। उसले साँढेको रगतले जे गरेको थियो बोकाको रगतले पनि त्यसै गर्नु पर्छ। उसले विशेष आवरणअघि अनि माथि बोकाको रगत छर्कनु पर्छ।16 यसरी हारूनले महा पवित्रस्थान शुद्ध पार्ने काम गर्छ। इस्राएलका मानिसहरूलाई शुद्ध पार्न हारूनले यी सब कार्य गर्नु पर्छ। तिनीहरूले धेरै पापहरू गर्छन् र तिनले भेट हुने पालको निम्ति पनि यस्तो कार्यहरू गर्नु पर्छ कारण यो धेरै अशुद्ध मानिसहरू माझमा छ।
छाडा छोडिएको बोकोलाइ के भयो?
20 “यसर्थ, हारूनले महा-पवित्रस्थान, भेट हुने पाल अनि वेदी शुद्ध पार्नेछन्। त्यसपछि हारूनले परमप्रभुको निम्ति जिउँदो बोका ल्याउनेछन्। 21 जिउँदो बोका माथि हात राखेर उसले सबै पापहरू, सबै अपराधहरू अनि इस्राएली मानिसहरूले गरेको सबै भूल कर्महरू स्वीकार गर्नेछन्। यसरी मानिसहरूको सबै पाप बोकामाथि राखेर उसले त्यसलाई मरुभूमिमा जानु छाडिदिने छन्। एकजना मानिस बोकालाई मरुभूमितिर लिएर जान पर्खिरहेको हुनेछ। 22 यसर्थ बोकाले मानिसहरूको सबै पापहरू एकान्त ठाउँमा बोकेर लैजाने छ। मानिस जसले बोकालाई लिएर जान्छ, उसले यसलाई मरुभूमिमा छोड्ने छ।
साँढेको बलिदान हारूनको आफ्नै पापको लागि थियो। पहिलो बोकाको बलि इस्राएली मानिसहरूको पापको लागि थियो । त्यसपछि हारूनले आफ्नो हात जीवित छाडा छोडिने बोकाको टाउकोमा राख्थे र – प्रतीकात्मक रूपमा – मानिसका पापलाई छाडा छोडिने बोका माथी स्थानान्तरण गर्दथे। त्यसपछि मानिसहरूका पापहरू मानिसहरूबाट टाढा हटाइएको छ भनेर संकेतको रूपमा बोकालाई उजाडस्थानमा छोडिन्थ्यो। यी बलिहरूले तिनीहरूको पापहरूको प्रायश्चित गरिन्थ्यो। यो प्रत्येक वर्ष प्रायश्चितको दिनमा गरिन्थ्यो र त्यो दिन मात्र गरिन्थ्यो।
प्रायश्चितको दिन र दुर्गा पूजा
किन परमेश्वरले प्रत्येक वर्ष यो चाड़ यहि दिनमा मनाउने आज्ञा गर्नु भयो ? यसको मतलब के हो ? दुर्गा पूजाको समय पछाडि फर्केर हेर्दा जब दुर्गाले भैंस राक्षस महिषासुरालाई हराइन्। यसले विगतमा भएको घटनाको सम्झना गर्दछ। प्रायश्चितको दिन पनि विजयको स्मरणार्थमा थियो तर यो भविष्य सूचक थियो किनकि यसले दुष्ट माथी भविष्यमा विजयको आशा राख्यो। यद्यपि वास्तविक जनावरहरूको बलिहरू चढाइन्थ्यो, ती प्रतीकात्मक पनि थिए। वेद पुष्थकन (बाइबल) ले वर्णन गर्दछ
4 किनकि बहर र बाख्राहरूको रगतले पापहरू पखाल्न सक्दैन।
प्रायश्चितको दिनमा बलिदानहरूले वास्तवमै पुजारी र भक्तहरूको पापलाई हटाउँदैन थिए, किन उनीहरूलाई हरेक वर्ष चढाइन्थ्यो ? वेद पुष्थकन (बाइबल) ले वर्णन गर्दछ
व्यवस्थाले त हामीलाई भविष्यमा आउने असल वास्तविकताको धमिलो चित्र मात्र देखायो। व्यवस्था वास्तविकताको साँच्चो रूप होइन। त्यस व्यवस्थाले त मानिसहरूलाई हरेक साल त्यही बली चढ़ाउन सिकाउँछ। परमेश्वरलाई पुज्न आउनेहरूले त्यही बलि चढ़ाउन छोड्दैनन्। तर व्यवस्थाले ती मानिसहरूलाई कहिल्यै पूर्णतातिर डोर्याउन सकेन।2 व्यवस्थाले तिनीहरूलाई पूर्णतातिर डोर्याउन सक्ने भए बलिहरू धैरै अघि नै शेष भइसकेका हुने थिए। ती मानिसहरू आफ्ना पापहरूबाट पहिल्यै शुद्ध भइसकने थिए। अनि आफ्ना पापहरूको लागि तिनीहरूले आफूलाई अपराधी अनुभव गर्ने थिएनन्। तर व्यवस्थाले त्यो गर्न सक्दैन।3यी बलिहरूले त प्रत्येक वर्ष मानिसहरूलाई आफ्ना पापहरू सम्झाउने काम मात्र गर्छ।
हिब्रू १०: १-३
यदि बलिहरूले पापहरू हटाउन सक्ने भए, तिनीहरूलाई दोहोर्‍याउनु आवश्यक पर्ने थिएन। तर उनीहरू प्रभावकारी थिएनन भनेर देखाउँदै उनीहरूलाई प्रत्येक वर्ष दोहोर्याइयो।
तर जब येशू ख्रीष्टले (येशु सत्संग) आफूलाई बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भयो सबै परिवर्तन भयो।
5 तसर्थ जब येशू पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं बलि र भेटीहरू चाहनुहुन्न,
तर तपाईंले मेरा निम्ति एउटा शरीर तयार गर्नुभयो।
6 बलि चढाइएका र डढाइएका पशुहरूले तपाईं प्रसन्न हुनुहुन्न।
पापहरू पन्छाउन चढाइएका बलिले तपाईं प्रसन्न हुनुहुन्न।
7 तब मैले भने, ‘परमेश्वर म यहाँ छु,
व्यवस्थाको किताबमा मेरो बारे लेखिएको छ।
तपाईले चाहेको काम गर्न म आएको छु।’”
हिब्रू १०: ५-७
उहाँ आफूलाई बलिदानको रूपमा चढाउन आउनु भयो। र जब उहाँले यो गर्नु भयो
… … … … हामी सबैका लागि येशू ख्रीष्टको शरीरको बलिदानको माध्यमबाट पवित्र बनाइएका छौं।
दुईवटा बोकाको बलिदान प्रतीकात्मक हिसाबले भविष्यमा हुने येशूको बलिदान र येशूको विजयलाई औंल्याइएको थियो। उहाँ बलि चढाइएको बोका हुनुहुन्छ किनकी उहाँ बलि हुनु भयो। उहाँ बलिदानको लागि छाडा छोडिएको बोका पनि हो , किनकि उहाँले विश्वव्यापी समुदायको सबै पापहरू लिनु भयो र ती हामीबाट टाढा हटाइदिनु भयो , ता की हामी शुद्ध हुन सकौ।
के प्रायश्चितको दिनको कारण दुर्गा पूजा भयो ?
इजरायलीहरूको इतिहासमा हामीले थाहा पायौं कि कसरी इजरायलबाट निर्वासित भएकाहरु ईसा पूर्व ७०० मा भारतमा आएर भारतको शिक्षा र धर्ममा धेरै योगदान पुर्‍याए। यी इस्राएलीहरूले प्रत्येक वर्ष प्रायश्चितको दिनलाई सातौं महिनाको १०औं दिनमा मनाउँथे। हुन सक्छ, जसरी उनीहरूले भारतका भाषाहरूमा योगदान पुर्‍याए, तिनीहरूले पनि आफ्नो प्रायश्चितको दिनलाई योगदान पुर्‍याए जुन दुर्गा पूजा बन्यो, जुन खराबी माथि ठूलो विजयको स्मारक हो। यो हाम्रो दुर्गा पूजाको ऐतिहासिक समझसँग मिल्छ , जुन ईसा पूर्व ६०० को वरिपरि मनाउन थालियो।
कहिले प्रायश्चितको दिनको बलिदानहरू समाप्त गरियो
हाम्रो लागि येशूको बलि ( येशू सत्संग ) प्रभावकारी र पर्याप्त थियो। क्रूसमा येशूको बलिदानको केही समयपछि ( ३३ ए.डी.), रोमीहरूले ७० ए.डी .मा महापवित्र स्थानको साथको मन्दिरलाई ध्वस्त पारे। त्यसबेला देखि फेरि कहिले पनि यहूदीहरूले प्रायश्चितको दिनमा कुनै बलिदानहरू चढाएनन्। आज यहूदीहरूले यो चाडलाई उपवासको दिन भनेर मनाउँछन्। बाइबलले वर्णन गरे झैं प्रभावकारी बलिदान चढाइए पछि त्यहाँको वार्षिक बलिदानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पर्दैन। त्यसैले परमेश्वरले यो रोक्नुभयो।
दुर्गा पूजा र प्रायश्चितको दिनको प्रतिरूपहरू
दुर्गा पूजाले दुर्गाको प्रतिरूपलाई समावेश गर्दछ ताकि देवता मूर्तिमा वास गरून्। प्रायश्चितको दिन आउँदै गरेको बलिदानको भविष्यवाणी थियो र कुनै पनि प्रतिरूपलाई आव्हान गर्दैन। महापवित्र स्थानमा परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ कुनै प्रतिरूप थिएन।
तर वास्तवमै बलिदानमा, सयौं वर्षसम्म धेरै प्रायश्चितको दिनहरू मध्ये एकले इशारा गरिसकेको थियो, त्यहाँ एक प्रातिरूपलाई आग्रह गरियो। जसरी वेद पुष्थकन (बाइबल) ले वर्णन गर्दछ
15 परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन।
तर परमेश्वर हुबहु येशू हुनुहुन्छ।
सृष्टिका सम्मूर्ण थोकमाथि येशू शासक हुनुहुन्छ।
प्रभावकारी बलिदानमा, अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूपलाई आह्वान गरिएको थियो र त्यो मानिस येशूको रूपमा देखाइयो।
हामी वेद पुष्थकन (बाइबल) को माध्यमबाट हेर्दैछौं। हामीले देख्यौं कि कसरी परमेश्वरले आफ्नो योजना प्रकट गर्न धेरै संकेतहरू दिनुभयो। सुरुमा उहाँले आउँदै गरेको ‘ऊ’ को भविष्यवाणी गर्नुभयो। यसपछि श्री अब्राहमको बलिदान, निस्तारको बलिदान र प्रायश्चितको दिन पनि आयो। इस्राएलीहरू माथि मोशाको आशिष्र र श्रापहरू अझै छन्। यसले उनीहरूको इतिहासलाई स्थापित गर्दछ, बिस्तारै इस्रायलीहरूलाई सारा संसारभर, यहाँ सम्म कि भारतसम्म, यहाँ वर्णन गरिए जस्तो।
लेखक Ragnarप्रकाशित 01/01/2017 28/08/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स दुर्गापूजा
Satya Veda Pusthakan: Good News in English